Soo dejisan SparkoCam 2.7.2 – Vessoft
Bogga rasmiga ah: SparkoCam
SparkoCam – software ah si aad u dalbato saamaynta badan image ah ka webcam in waqtiga dhabta ah. SparkoCam taageertaa dhowr ah oo saamaynta video, walxaha dhaceen iyo arrimo in la isticmaalo ee CHAT kala duwan video iyo Rasuulkiisa. software The waa inay awoodaan inay isticmaalaan webcam a mar dhowr Rasuullo sida Skype, ooVoo, Camfrog, Line, iwm SparkoCam ayaa set badan oo ah qalab reserved software ee user. Sidoo kale SparkoCam kuu ogolaanayaa inaad si ay u isticmaalaan Canon iyo Nikon ah kamaradaha digital reflex-hal gashto sida Webcama caadiga ah.
Isku dhex leh CHAT kala duwan video iyo Rasuulkiisa
Taageerada saamaynta badan iyo animations
Isticmaalka of webcam a dhowr CHAT video isku mar
Isticmaalka of Canon iyo Nikon kamaradaha digital reflex-hal gashto sida caadiga ah Webcama
Soo dejisan SparkoCam
Faallo ku saabsan SparkoCam
SparkoCam Xirfadaha la xiriira